नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण
गतवर्षको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीका लागि प्रतिशेयर रू. ५५ का दरले नगद लाभांश दिएको यस कम्पनीको चुक्तापूँजी हाल रू. १५ अर्ब छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा जगेडा कोषमा रू. ८६ अर्ब ४० करोड ८२ लाख ४२ हजार छुट्याएको छ । गतवर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ३३ अर्ब ८५ करोड ३२ लाख ७० हजार कुल आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष सोही अवधिमा रू. ३२ अर्ब ४७ करोड ५८ लाख ८ हजार आम्दानी गरेको छ ।
कुल आम्दानीमा कमी आएसँग कम्पनीको नाफामा असर परेको छ । गतवर्ष रू. ११ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख ६ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ९ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख २५ हजार मात्र खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक ८८ रुपैयाँ ७५ पैसा छ । सोमवारको शेयर कारोबारमा कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो दिनभन्दा २ अंक घटेर रू. ७१५ कायम भएको छ ।
2019-06-04 - 235 view(s) - abhiyan